भान्जीको जालमा यसरी फसे सेनाका सहायक रथी, देखाउने मामा भाञ्जी खासमा खासमा प्रेमी प्रेमिका ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
भान्जीको जालमा यसरी फसे सेनाका सहायक रथी, देखाउने मामा भाञ्जी खासमा खासमा प्रेमी प्रेमिका !
प्रकाशित मिति २६ पुष २०७४, बुधबार १६:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । कृषि विकास बैंक न्यूरोड शाखाकी सहायक टेलर नागार्जुन १ की ३२ वर्षीया दीपिका रेग्मी ४ करोड ९१ लाख रकम हिनामिना मुद्दामा समातिइन्। प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। खुल्यो , घटनाको मुख्य योजनाकार उनै रहिछिन्। प्रहरीका लागि हिनामिना भएको रकम पनि खोज्नुपर्ने चुनौती थियो। प्रहरी अनुसन्धानमा लाग्यो। नेक्सस पहिल्याउँदै जाने क्रममा करिब ३३ लाख रूपैयाँ सेनाका सहायक रथी रमेश विष्टको बैंक खातामा भेटियो। प्रहरी चकित खायो। अब प्रहरीको अनुसन्धान सहायक रथी विष्ट र रेग्मीको सम्बन्धमा केन्द्रीत भयो ।
Post View Count: 203
सरकारी ढुकुटीको दुरुपोग गर्ने स्वास्थ तथा मानवीय सेवा मन्त्रीद्वारा राजिनामा
वासिङ्गटन । अमेरिकाका स्वास्थ तथा मानवीय सेवामन्त्री टम प्राइसले पदबाट राजिनामा…
एकघण्टाकी सुत्केरी स्टेचरमै परीक्षा केन्द्र पुगिन्
म्याग्दी । जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका–६ ताकमकी एक परीक्षार्थीले बच्चा जन्माएको एकघण्टामै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को परीक्षा दिन केन्द्रमा पुगेकी…
सलमान खानका चर्चित तीन प्रेम कहानी
एजेन्सी । पछिल्लो समय सलमान खान इदको अवसरमा रिलिज भएको फिल्म…
अव २८ को आन्तिम परिणाम आउन बाँकी , १९ मा एमाले अगाडि (सूची सहित )
काठमाडौं । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रम जारी छ। अव जम्मा २८ तहको परिणाम आउन…
पूर्वसभामुख नेम्वाङ अस्वस्थ
काठमाडौं । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ अस्वस्थताका कारण सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
सिर्जना बस्नेत: मैले धेरै सोचेर तिम्रो नाममा यो अन्तिम पत्र लेख्दै छु
खै के भनेर सम्बोधन गरौं? मलाई नै थाहा छैन। मैले धेरै सोचेर तिम्रो नाममा यो अन्तिम पत्र लेख्दै छु।…
३३ किलो सुन र सनम हत्या प्रकरण : लोहनीलाई जोगाउन डिएसपीलाई गृह मन्त्रालयबाटै भगाईयो 76 views